Iron oxide Pigments, Agba brik ink, ígwè oxide Agba - Huamei
Iron oxide red usoro
Iron oxide odo usoro
Mejupụtara-acha anụnụ anụnụ na usoro
Iron oxide green usoro
Special toner usoro maka na agba ụzọ
Special toner usoro maka na agba korota
Special agba maka n'ala
Ultrafine na chụsasịrị achụsasị ígwè oxide
Special toner maka na agba n'ala tile
Agba? Pigments maka ụlọ ihe
Iron oxide ink na High okpomọkụ na-eguzogide
Architectural n'elu ji achọ mkpuchi mmiri
The ụlọ ọrụ na ngwaahịa na-n'ọtụtụ ebe na agba korota ụzọ, acha ihe permeable ụzọ, flooring, agba, n'ala taịl nile, ink, agba, egbuke, na agba akwụkwọ na ndị ọzọ ọrụ. E nwere ihe fọrọ nke nta 30 iche ígwè oxide red, ígwè oxide odo, mejupụtara-acha anụnụ anụnụ, n'ala green, ígwè oxide nwa, ígwè oxide aja aja, siri peach, na na.
The ụlọ ọrụ nwere ihe fọrọ nke nta ka afọ 30 nke akụkọ ihe mere eme na mmepụta nke ígwè oxide pigments ma ọgaranya mmepụta ahụmahụ na-eme nnyocha ike. The agba pavement ink adopts elu mmepụta technology na mmepụta akụrụngwa, na nkà mmụta sayensị na etozu okirikiri nhọrọ ukwuu, na mkpokọta larịị bụ na-eduga ọnọdụ na anụ ụlọ ụlọ ọrụ. Ọ bụ ngosipụta enterprise of China bụ ígwè ígwè oxide ụlọ ọrụ.
The ụlọ ọrụ nwere a ike otu na elu mmepụta na nhazi akụrụngwa, ndị tozuru okè mmepụta technology okè mgbe-sales ọrụ. The technical egosi nke ya na ngwaahịa ruru na karịrị mba ụkpụrụ, na-ere ọma niile ná mba na-ọma natara site ọrụ.
Henan Huamei Chengde ink Co., Ltd. tumadi na-arụpụta ígwè oxide pigments, ha na-n'ọtụtụ ebe na agba korota ụzọ, acha ihe permeable ụzọ, flooring, ágbá, n'ala taịl, ink, ágbá, egbuke, na agba akwụkwọ na ndị ọzọ ọrụ. E nwere ihe fọrọ nke nta 30 iche red, odo, acha anụnụ anụnụ, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, nwa, agba aja aja, odo odo, oroma, isi awọ, siri peach, na na. Ebe ọ bụ na ya oruru, ụlọ ọrụ eguzobewo a zuru ezu sample nnyocha ma ụfọdụ, sample njigide usoro, irè akara nke sample analysis na ngwaahịa Mbupu nsuso na echesinụ dị na ISO9001 mba quality management usoro na ISO14001 mba gburugburu ebe obibi management usoro ụkpụrụ. Ndị a nwere ike inye gị na mụ na elu àgwà ink ngwaahịa.
(N'ihi na ọnọdụ nke n'ezie iji na-beyon ...
black ígwè oxide
Product arụmọrụ: Ezigbo anụ ahụ na ...
The n'ebe ndịda ọwụwa anyanwụ nke nrutu nke Louli Xian na Zhaoyan Xian na Huojia mba, Xinxiang, Henan Province
Atụmatụ - Hot Products - Sitemap - IGBOB Mobile © Copyright - 2010-2019 : All Rights Reserved.
Hot Sale Agba ink Powder ígwè oxide Yellow, ígwè oxide Red N'ihi mkpuchi , Iron oxide ink Red Black Brown Ma Yellow Agba, ígwè oxide Red 130 , Red ígwè oxide Black, ígwè oxide Red Factory Prices ,